4 Jimicsiyada loo diyaarshay iyo tababarka ka dhanka ah Whiplash / Neck Slang
4 jimicsi oo kuu gaar ah adiga oo qoorta isku garaacaya
14 / 06 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, qoorta, Jimicsiga iyo Jimicsiga, Jimicsiyada xoog/av waxyeelladayda
4 Jimicsi kuu gaar ah oo loogu talagalay Dhaawaca Whiplash / Neck Length Length
Ma waxaad ka xanuunsanaysaa qoor xanuun kadib shil ama naxdin? Miyaa lagaa helay dhaawac qoorta ama qoorta? Halkan waxaa ah 4 jimicsi oo lagugu habeeyay adiga oo leh qoorta / qoorta qoorta oo xoojin kara muruqyada qoorta - jimicsiyada ayaa sidoo kale kugu habboon adiga muruqyada qoorta oo daciif ah. Jimicsiyadan (tababarka isometric) waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu xoojiyo muruqyada qoorta oo qoto dheer hab la waafajiyay, hab deggan oo ujeedadu tahay in la bixiyo hawl wanaagsan, ka yar myalgias iyo kalagoys xanuun - sidoo kale waa wax iska caadi ah dadka qaba qoorta inay la halgamaan dawakhaad og madax xanuun. Tababbarka Isometric micnaheedu waa jimicsi la'aan dhaqdhaqaaqyo waaweyn, laakiin halkii diiradda la saari lahaa firfircoonaanta iyo hawlgelinta muruqyada adoo qoorta isku qabanaya isla markaana leh iska caabin kaladuwan.
Whiplash waa erey qeexaya dhaawac kaas oo jilibka, jilicsanaanta, muruqyada iyo kala-goysyada qoorta ay saameyn ku yeeshaan dhaq-dhaqaaq lama filaan ah oo qoorta iyo jirka ah - wax caadi ahaan ku dhaca shilalka baabuurta (gaar ahaan shilalka gadaal-dhamaadka), dhaawacyada iyo dhicitaanka . Shakaalka qoorta ayaa magaciisa lagu magacaabaa 'shakaalka' aan la xakamayn ee qoorta ku dhacda marka jirku si lama filaan ah u istaago waxayna u dhowdahay gadaal iyo gadaalba dhaqdhaqaaq rabshad wata oo waxyeelo u geysan kara qoorta iyo dhismayaasha la xiriira. Calaamadaha qoorta / qoorta ayaa isla markiiba dhici kara ama muddo dheer kadib shilka laftiisa.
MUUQAAL: 4 Jimicsi oo Muhiim Ah Oo Lid Kaga Soo Horjeedo Neck Slang
Halkan waxaad ku arki kartaa afar jimicsi oo muhiim kuu ah adiga oo ay saameeyeen qoorta. Jimicsiyadu waxay ka kooban yihiin tababarka isometric - taas oo ah, qaabka ugu tixgelinta badan ee adiga lagugu siiyo ee luqunta lagu lafo (fasalka 1-2). Xor ayaad u tahay inaad iska qorto kanaalkeena YouTube wixii intaa ka badan oo fiidiyow ah.
1. "Garka labka ah" (Tababbarka muruqyada qoorta oo qoto dheer)
Layli fudud oo lagu samayn karo meel kasta - tusaale ahaan gaadhiga oo u socda shaqada. Jimicsiga laba garka ah waxaa lagu sameyn karaa jiif, taagnaan ama fadhiisasho waxaana lagu sameyn karaa iyadoo toosinta dhabarka loo toosiyo si aad u hesho muuqaal caadi ah. Ka dib garka u soo jiid gudaha adiga oo madaxaaga aad ugu fogaanaynin dhanka laabtaada - sawirka kore, haweeneyda ayaa in yar aad u badan madaxa u foorarsata. Garka sidan sidan ugu hay 10-15 ilbidhiqsi ka hor inta aanad sii deyn mar labaad oo nasan ilaa 15 sekan. Kadib ku celi jimicsiga. Kuwa idinka mid ah ee qoorta ka dhaawacan, waxaan kugula talineynaa inaad ku bilowdo 4 ku celcelin ah 3 nooc - ka dibna aad u kordhiso inta aad dareemeyso inaad sii xoogeysaneyso. Kuwa kale, waxaad isku dayi kartaa 6-8 ku celcelin ah oo ka badan 3-4 nooc. Jimicsiga waxaa la sameeyaa maalin kasta oo kale.
2. Isometric flexion lateral (Wareega dhinaca leh iska caabin)
Toosi dhabarkaaga iyo qoortaada ilaa aad lahaatid jilibka dhexdhexaad ah iyo qaab wanaagsan. Kadib hal sac oo ku dheji dhinaca madaxa, qiyaastiina dhinaceeda isha / foodda hore. Cadaadis yar ku qabo dhinaca madaxa oo si tartiib ah qoorta uga cadaadi dhanka gacanta oo dhaqdhaqaaqa gacanta. La soco: Qoorta waa inaysan bedelin booska. Qiyaastii 10-20% xoog iyo ku hay ilaa 10 sekan kahor intaadan nasan 10-15 sekan inta udhaxeysa ku celcelin kasta. Loogu talagalay kuwa qaba dhaawaca qoorta: Layligu wuxuu ku socdaa kor 3-4 ku celcelin ka badan 3 xabo. Adiga oo aan dhaawac lahayn: Samee jimicsiga in kabadan 4-6 ku celcelis ah 3-4 koob.
3. Isometric flexion (horay u foorarsiga oo leh iska caabin)
Layligu waxaa la sameeyaa isagoo fadhiya ama taagan. Toosi dhabarkaaga iyo qoortaada ilaa aad jaangooyo caadi ah haysatid (qoorta dhexdhexaad ah). Dabadeed hal hal timir wejigaaga adigoon qoortaaga isku bedelin, ka dib markaas cadaadis yar saar wejigaaga oo si tartiib ah qoortaada ugu cadaadi. Ka fikir inaad jiifto qiyaastii 10-20% dadaal layligan bilowga ah - horumarka waxaad si tartiib tartiib ah u kordhin kartaa dadaalkan xoog, laakiin joog heer hoose, badbaado leh muddo dheer kahor intaadan kordhin xamuulka. Cadaadiska hay ilaa 10 ilbiriqsi ka dibna naso 10-15 ilbiriqsi. Kuwa idinka mid ah ee qoorta ka dhaawacmay, waxaan kugula talineynaa inaad jimicsigaan kor ku sameyso 3-4 ku celcelin i 3 xabo. Adiga oo aan wax dhaawac ah qabin markaa jimicsiga waa la sameyn karaa 4-6 ku celcelis ah oo ah 3-4 koob.
4. Isometric wareeg (wareegga qoorta oo leh iska caabin)
Samee jimicsiga adigoo fadhiya ama taagan. Hubso inaad leedahay meel qoorta oo dhexdhexaad ah iyo muuqaal ahaan. Ka dibna mari hal timireed dhinaca madaxa, qiyaastii dhinaca isha / daanka. Cadaadis yar mari dhinaca madaxa oo si tartiib ah ugu cadaadi qoorta adigoo u wareegaya dhanka gacanta. La soco: Qoortu waa inaysan beddelin booska, dhaqaajiso muruqyada oo ha dhaqaajin. Qiyaastii 10-20% xoog iyo ku hay ilaa 10 sekan kahor intaadan nasan 10-15 sekan inta udhaxeysa ku celcelin kasta. Loogu talagalay kuwa qaba dhaawaca qoorta: Layligu wuxuu ku socdaa kor 3-4 ku celcelin ka badan 3 xabo. Adiga oo aan dhaawac lahayn: Samee jimicsiga in kabadan 4-6 ku celcelis ah 3-4 koob.
Kuwani waa jimicsiyo wanaagsan oo ay habboon tahay in si joogto ah loo sameeyo saameynta ugu badan - laakiin waxaan ku xusuusineynaa inay qaadan karto dhowr toddobaad ka hor intaadan bilaabin inaad aragto farqiga cad ee shaqada muruqyada iyo qoorta.
Waxay kuxirantahay naftaada iyo xaaladaada caafimaad. Raadi waxa adiga kugu habboon bilowga oo si tartiib ah u dhis laakiin hubaal waa mustaqbalka. Xusuusnow in jimicsigu sababi karo xannib bilowga, maadaama aad si tartiib tartiib ah u burburinayso meelaha dhaawacan (unugyada dhaawaca iyo unugyada nabarrada) waxaadna ku beddelaysaa unug caafimaad oo jilicsan oo shaqeynaya. Tani waxay noqon kartaa waqti qaadasho laakiin hawl aad u fiican. Haddii aad leedahay cudur ogaansho, waxaan kaa codsaneynaa inaad weydiiso takhtarkaaga haddii jimicsiyadaan waxtar kuu yeelan karaan - si macquul ah iskuday naftaada. Waxaan si kale kugu dhiirigalinaynaa inaad dhaqaaqdo oo aad lugeeysid dhul qallafsan haddii ay suurtagal tahay - xor u noqo inaad aragto kuweenna YouTube kanaalka talo-siinta iyo jimicsi dheeraad ah.
Xor ayaad u tahay inaad layligaan la wadaagto saaxiibbada, saaxiibbada iyo dadka aad is garataan. Haddii aad jeclaan lahayd laylisyada loo diro dukumiinti ahaan oo leh celcelis iyo wixii lamid ah, waxaan ku weydiineynaa sida oo aad la xiriirtaa adigoo adeegsanaya bogga Facebook iyada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, iska dhaaf uun nala soo xiriir - markaa waxaan kuugu jawaabeynaa sida ugu wanaagsan ee aan kari karno, gebi ahaanba waa bilaash.
AKHRISO: - 8 Talo Wanaagsan iyo Talaabooyin Madax xanuunka ah
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Vondt-i-nakken-og-whiplash.jpg?media=1648573622 450 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-06-14 09:03:462018-05-28 12:11:134 jimicsi oo kuu gaar ah adiga oo qoorta isku garaacaya
4 jimicsi oo fidsan oo ka dhan ah dhabarka adag ARDAYGA: Qaxwaha wuxuu yareyn karaa waxyeelada beerka ee ay keento aalkolada